17th June 2021 17th June 20219views
चितुवा आक्रमणबाट बालिका घाईते
दमौली/व्यास नगरपालिका वडा नं. १२ की साढे दुई बर्षिया बालिका आईतवार साँझको चितुवा आक्रमणबाट घाईते भएकी छन् । घरको पिंढीमा बसेर खाना खाँदै गरेकी अनुस्का परियारलाई चितुवाले आक्रमण गरेको थियो । आमाको साथैमा रहेकी बालिकालाई चितुवाले झम्टेर २० मिटर पर पु¥याउन सफल भएपनि हिम्मतीली आमा २९ बर्षिया मधु परियारले चितुवाको मुखबाट छोरीलाई खोसेर बचाएकी थिईन । अनुस्काको चिउँडो, छाती र घाटीमा चोट देखिएको छ । आईतबारै दमौली अस्पतालमा उपचार गराएकी अनुस्काको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । मानवबस्ती वरपर चितुवा आउने क्रम बढेकाल सजग हुन सचेत हुन वन डिभिजन तनहुँले अनुरोध गरेको छ ।
कांग्रेसको प्रश्न– न्याय दिने कि द्वन्द्व बढाउने ?
व्यासको चार वर्षे कार्य प्रगति समिक्षा :विभिन्न सोह्र...